चिनी प्रकरणमा किन यादव हटाउन खोज्दैछन् भट्ट ? - Dainik Nepal
चिनी प्रकरणमा किन यादव हटाउन खोज्दैछन् भट्ट ?
दैनिक नेपाल २०७५ असोज २६ गते ९:२०
काठमाडौं, २६ असोज । अहिले चिनीको मुल्य निर्धारण प्रकरण र भ्रष्टाचारका विषयमा उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रीका यादवविरूद्ध कस्सिएर लागेका छन्, सांसद लेखराज भट्ट । संसदको लेखा समितिको उप समितिका संयोजक रहेका भट्ट यादवविरूद्ध यसरी लाग्नुको दुईटा कारण रहेको नेकपा उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
पहिलो, यादवलाई मन्त्रीपदबाट हटाउनका लागि चिनी प्रकरणलाई बलियो बनाउने र सोही ठाउँमा आफू पुग्ने रणनीति भट्टले बनाएका छन् । अर्को, चिनी प्रकरणमा भएको अर्बौं घोटालामा सबै दलका हिस्सेदार भए पनि भट्टका भागमा केही नपर्नू । ‘जनताको न्युनतम आवश्यकताका विषयमा मात्र होइन, व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिमा पनि कुरा जोडिएको छ’, नेकपा स्रोतले भन्यो,‘यहि विवादलाई उचालेर मन्त्री हटाउने खेल पनि सुरू भएको छ ।’
यादव माओवादी छाडेको निक्कै पछि एकीकरण प्रक्रियामा आएका थिए । भागवन्डामा मन्त्रालयको जिम्मा पाएका उनी नेकपामा रामबहादुर थापा बादल कित्तामा उभिएका छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निजक रहेका भट्टले यहि विवाद उचालेर यादवलाई पाखा लगाउँदै आफु सो मन्त्रालयमा जाने चाहना राखेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
‘गृहमन्त्री रहेका बादलसँग प्रचण्डको मतभेद रहेको छ, यहि मतभेदलाई जनतासँग जोडिएको विषय उठाएर सार्वजनिक पद नै परिवर्तन गरिदिने तयारी भएको छ’, नेकपा स्रोतले भन्यो,‘चिनीको बजार मूल्य आकाशिएको विषयमा छानबिनका लागि बनेको उप समितिमा लेखराज भट्ट बस्नुको स्वार्थ उनको आकांक्षसँग जोडिएको छ ।’
स्रोतका अनुसार ७ नम्बर प्रदेशमा पार्टीको जिम्मा नपाएका भट्टलाई प्रचण्डले सरकारमा मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका छन् । सोही कारण उनले कुनै पनि पदाधिकारीमा आफुलाई उभ्याउन चाहेनन् । तर मन्त्री बनाउने विकल्पमा पूर्वएमाले कित्ताबाट नभई आफ्नो भागका मन्त्री हटाउनुपर्ने भएका कारण विवादलाई अझ बलियो बनाउन भट्ट कस्सिएका हुन् ।
के हो चिनी विवाद ?
चिनीको बजार मूल्य आकासिएको विषयमा छानबिन गरेको संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले चिनीको मूल्य निर्धारणमा त्रुटि रहेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विस्तृत छानबिन गर्न दिन सिफारिस गरेको छ ।
उक्त उपसमितिले चिनीको बजार मूल्य ६३ रूपैयाँ प्रति किलो बनाउन सम्भव रहेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल मूल्य घटाउन सरकारलाई भनेको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले आफु पनि छानबिनको पक्षमा रहेको भन्दै नेपाली उद्योगहरूलाई बचाउन चिनीमा कोटा प्रणाली लागु गर्नु परेको दाबी गरेका छन् ।
चाडबाडको बेला बजारमा चिनीको मूल्य ह्वात्तै बढेपछी संसदको लेखा समितिले त्यसबारेमा छानबिन अगाडि बढाएको थियो ।
सरकारी अधिकारीहरूसँगको छलफलबाट सन्तुष्ट नभएका समितिका सदस्यको माग पछि छानबिनकालागि उपसमिति गठन गरिएको थियो ।
चिनीको मूल्य निर्धारण गर्दा त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको उपसमितिले थप छानबिनका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको संयोजक भट्टलाई उदृत गर्दै बीबीसी नेपालीले जनाएको छ ।
उपसमितिले चिनीको आयात कोटालाई खुकुलो बनाउन समेत सरकारलाई भनेको छ। वार्षिक १ लाख मेट्रिक टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले लागु गरेपछि बजारमा चिनीको भाउ बढेको थियो ।
सरकारले चिनीको खुद्रा मुल्य ७० रूपैयाँ प्रतिकिलो तोकेको छ। तर बजारमा ८५ रूपैयाँ सम्ममा बिक्री भइरहेको बताइन्छ । जुन मूल्य ६३ रूपैया प्रतिकेजीमा झार्न सम्भव रहेको उपसमितिको भनाइ छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले आफु पनि छानबिनको पक्षमा रहेको बताए । अख्तियार छानबिन गर्नु पर्छ, त्यो राम्रो विषय हो मैलै पनि छानबिनको माग नै गरेको बताएका उनी उद्योग बचाउन र किसानको उखु बिकोस् भनेर कोटा लगाएको दाबी गर्छन् ।
कसरी आयो विवाद ?
यादवले कोटा प्रणाली लगाउँदा झन्डै एक अर्ब भन्दा माथिको रकमको चलखेल भएको पार्टीभित्र चर्चा छ । उक्त रकम यादवकै पहलमा विभिन्न नेताको घरसम्म पुगिसकेको हल्ला पार्टी पंक्तिमा चलिसकेको छ । यहाँसम्मकी विपक्षी दलका नेता पनि चिनीको प्रकरणको अनुचित लाभको भागीदार बनिसकेको दाबी गरिएको छ ।